Monday June 10, 2019 - 10:02:54 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Madaxweynaha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa kulan la qaatay Madaxa howlgalka AMISOM ee Soomaaliya.
Kulanka ayaa looga wadahadlay qorshaha howlgalka AMISOM ee dhawaan la siiyay muddo kordhinta iyo waxaa ay ku qabanayaan.
Sidoo kale intii uu kulanka socday ayaa la isla soo qaaday horumarka laga sameeyay howlgallada ka dhanka ah AL-shabaab ee ka socda dalka.
Madaxa Howlgalka AMISOM ee Soomaaliya Francisco Madeira, ayaa sheegay in AMISOM ay muhiim u tahay xasiloonida Soomaaliya islamarkaana ku dadaalayaan sidii AL-shabaaab looga saari lahaa dalka.
Waxaa kale oo uu Mr Francisco Madeira sheegay in Madaxweynaha ay ka wada hadleen horumarka Ciidamada AMISOM ay ka sameeyeen howlgalladii dhawaan ka dhacay Shabeellaha hoose ee lagu qabtay Bariirre iyo Sabiid.